Volondavenona + Havoana Cardamom avo lenta, Tanora tanora sy avo lenta | Yuanhe Daqian
Home / Interior design / Volondavenona + Havoana Cardamom avo lenta, Tanora tanora sy avo lenta | Yuanhe Daqian
2021 / 08 / 15 FisokajianaInterior design 1851 0
Rehefa tsy foto-kevitry ny habaka fotsiny ny trano onenana dia manomboka miditra ao am-pon'ny olona ankehitriny ny estetika momba ny fiainana. Tsy trano honenana fotsiny ilay trano, fa fihetseham-po lalim-paka ho an'ireo mponina ihany koa.
Yuanhe Daqian dia mihevitra ny votoatin'ny vokatra Sunac Oriental Chen Yuan raha ny fahitan'ny mpampiasa azy. Amin'ny tontolon'ny maoderina, ny fiainana idealy dia adika amin'ny teny ankehitriny. Samihafa sy tanora, an-tsokosoko nefa be dia be, manome tanjaka vaovao ho an'ny mpianakavy tsirairay izany.
Ny fiandohana tsara dia tsara foana miaraka amin'ny fahamendrehana manjavozavo, ary toy izany koa ny famolavolana ny trano.
Ny efitrano fandraisam-bahiny dia misokatra miaraka amina loko volondavenona sy beige ambaratonga ambony, ary ny tetika miloko mampitony dia manampy sivana malefaka amin'ny habakabaka. Ny tetika miloko mampitony dia manampy sivana malefaka amin'ny habakabaka, manalefaka ny tsy faharetan'ny fiainana ary mahatsapa ny fiononana amin'ny fiverenana mody. Ny fanaka dia vita amin'ny lamba sy hoditra avo lenta, miaraka amina fitaovana metaly vitsivitsy, izay mifanaraka tsara mba hanatsarana ny kalitao sy ny ambaratongan'ny habakabaka ary hita taratra ny tsiro mahafinaritra ao an-trano.
Ny volomboasary maintso sy volomboasary volomboasary dia tandindon'ny fahavelomana ary manazava ny habaka. Na dia misoko mangina aza dia manana hery miavaka koa. Izy ireo dia toy ny hazavan'ny kintana kely amin'ny fiainana manjavozavo, mikarakara ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fianakaviana.
Ny fanaka malefaka dia natao hiarovana ny hazavana voajanahary araka izay azo atao. Amin'ny filentehan'ny masoandro dia mirotsaka ao an-trano ny tara-masoandro, manala ny tsy fandriam-pahalemana sy fitaintainana ao amin'ilay tanàna be olona. Amin'izao fotoana izao, ny endrika dia manaparitaka ny fetra eo anelanelan'ny habakabaka sy ny natiora ary mamela ny fianakaviana hiroboka amin'ny fifaliana amin'ny fiainam-pianakaviana.
Ny ivon'ny famolavolana dia "mifototra amin'ny olona", noho izany dia manitatra ny toetran'ny olona tsirairay izahay. Manangana rivo-piainana mirindra sy milamina miaraka amin'ny traikefa niainana samihafa miampy setroka sy fitaratra tena izy izahay.
Fahasarotan-tsain'ny tanora maro ny manana efitrano filalaovana ao an-trano. Ilay mpamorona dia manana fahitana lalina amin'ny filan'ny vondrona tanora ankehitriny ary manary ny fombafomba sarotra. Ny mpamorona dia noravahana fitaovana solosaina futuristic. Ny sary hosodoko rindrina sy tarehimarika amin'ny hazakazaka ihany no fanaraha-maso mazava tsara ny antsipiriany. Ity dia fanondroana mahery vaika ny amin'ny zavatra mahaliana sy fialambolin'ny mponina.
Mitombo ny zava-drehetra, manana fanantenana ny fiainana! Miverina amin'ny votoatin'ny habakabaka. Ny volomboasary maintso sy volomboasary masoandro dia mitohy ao amin'ny efitrano fandriana, milaza ny fahatsapana ny saha tsy miovaova. Ny tetika miloko mampitony dia mikoriana miaraka amin'ny habakabaka, mifangaro ao anaty landy voajanahary sy lamba ary mipetaka ao anaty fandriana malefaka sy malefaka. Ny gadona dia miovaova sy mirindra ary mandeha mahitsy amin'ny làlan'ny fiainana avo lenta.
Ny endrika sy haingon-trano minimalista dia mamorona rivo-piainana mahafinaritra. Ny fotoana mampihetsi-po indrindra amin'ny andro dia rehefa manakimpy ny masonao ianao. Eto ianao dia afaka mankafy ny fahanginana sy misintona angovo hiatrehana ireo toko ho avy amin'ny fiainana.
Ny fikatsahan'ny fianakaviana tsirairay ny famelana ny zanany hamoaka ny tena maha izy azy sy ny fitiavany ao an-tranony. Nanitatra ny fiasanay tao amin'ny toerana voafetra izahay. Ny efitranon'ireo ankizy dia tsy efitrano fatoriana mahaleo tena ihany fa koa hetsika isan-karazany mety.
Ny famolavolana dia miavaka amin'ny fanaka, izay misy faritra fatoriana sy faritra anaovana hetsika. Raha nanako ny rivotra iainana ankapobeny izahay dia nisafidy fitaovana malefaka sy malefaka handefasana ny pitsopitsony rehetra miaraka amin'ny fiarovana ny zaza, ka ny fieritreretana dia mitodika any am-pon'ny ankizy.
Anaran'ilay tetikasa: Sunac Dongfang Chenyuan Showroom
Adiresin'ny tetikasa: Changchun
Famolavolana fanaka malefaka: Yuanhe Daqian
Famolavolana kojakoja mafy: FENGYA 76 taona teknolojia an-trano (Shenzhen) Co.
Fotoana famolavolana: 2021.01
Fotoana famaranana: 2021.04
Faritry ny habaka: 130㎡
A-Unit: Company Unitech North China Changchun
Fanohanana manokana: Zhang Qingxun, Zhu Lu
Ekipa sary: ​​Trigonometry
Previous :: Ny tranon'ny distrikan'ny sekoly dia mamaky ny "taloha sy efa rava" ary mamerina ny kalitaon'ny fiainana Design endrika Shuangbao
2021 / 08 / 15 2564
2021 / 08 / 15 2111
2021 / 08 / 14 2006
2021 / 08 / 14 2361
2021 / 08 / 14 1702
2021 / 08 / 13 2557